Vaovao - nanambara ny rallye 2021 Honda CRF300L sy CRF300L American Rally
Tahaka an'i Dennis Chung, lehilahy avy any Honda any Toronto, nanombatombana rehefa nanambara ny vaovao ny Honda Europe tamin'ny fiandohan'ny volana desambra, ny fiara fanatanjahan-tena kely sy nohavaozina kely an'ny Honda dia hiditra amin'ny tsenan'i Etazonia. Raha ny marina, nilaza i Honda fa ny CRF no fanatanjahan-tena roa misy indroa amin'ny indostrian'ny môtô.
Miaraka amin'ny famoriam-bahoaka CRF300L sy CRF300L vaovao, ny hampitombo ny herinaratra, hampihena ny lanja ary hanatsara ny zava-bita ivelan'ny arabe? "Raha tsy nisy sorona lanja, fahamendrehana ary fomba fisehoana, ireo soatoavina, lanja ary fahamendrehana ireo dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny lazan'ny milina." Na dia takatray aza fa ny masinina roa dia saika mitovy amin'ny asany, afa-tsy ny fahaizan'ny solika, Ankoatry ny tsy fitovizan'ny mpiambina mahazatra sy ny fitaratra fitaratra misy ny fiaran'ny rallye, dia ampidirinay ihany koa ny famoaham-baovao nataon'i Honda momba ireo maodely roa etsy ambany ireo.
Ny herinaratra fanampiny sy ny tsela dia azo amin'ny fampitomboana ny famindran-toerana 15% - avy amin'ny 250 ka hatramin'ny 286 cc ary koa ny fanatsarana ny zava-bita ivelan'ny arabe amin'ny fampitomboana ny fikolokoloana sy ny fahazoana madiodio. Nandritra izany fotoana izany dia nilaza i Honda fa ny lanjan'ny fiara amin'ny ankapobeny dia nihena 11 pounds, izay tratra indrindra tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny fanadihadiana momba ny teknolojia manampy amin'ny fanatsarana ny hatevin'ny lovia sy ny haben'ny fantsona amin'ireo singa tsy tambo isaina. Ireo toro-hevitra momba ny endriny dia avy amin'ny andian-tsarimihetsika CRF an'ny Honda, raha MSRP dia mbola "tena mifaninana."
Amin'ny alalàn'ny vatany sy sary mena, fotsy, mainty ary manga, CRF300L dia mikendry ny haka tahaka ny fisehoan'ny andiany CRF Performance, ao anatin'izany ny CRF450X any Baja.
Toerana mitaingina Ny toerana mitaingina no novaina hanatsarana ny fidiran'ny mpitaingina sy ny fivezivezin'ny fiara. Ampitomboina ny zoro amin'ny tohana mba hahatonga ny toeran'ny kiho ho voajanahary kokoa, mora kokoa ny familiana, ary ampitomboina ny lanjan'ny tohatra hampihenana ny hovitrovitra. Ny sakan'ny faritra aoriana sy afovoan'ny seza dia mitoetra hitandrina fampiononana, raha manify kosa ny faritra anoloana mba hanatsarana ny fidiran'ny mpitaingina amin'ny feny sy ny lohalika. Ny spikes amin'ny tongotra dia afindra mihemotra ihany koa, amin'izay dia manamora ny fiasan'ny tongotr'ilay levera sy ny pedal frein, ary ny fonony aviavy farany ambony kosa dia nohavaozina mba hampihenana ny sakany. Omena koa ny farango fitaterana mpandeha.
Meter Ny metatra vaovao dia manana tarehintsoratra mainty eo am-pototry fotsy, ary ny tarehin-tsoratra dia 6 mm lehibe kokoa hanatsarana ny fahitana. Ankoatry ny famakiana haingam-pandeha, famantaranandro ary rpm, nampiana fiasa vaovao, ao anatin'izany ny toeran'ny fitaovana, ny kilometatra solika ary ny fanjifana solika. Ny metatra dia mihena ihany koa 0,01 pounds.
Ny rafitra maotera / fandefasana dia nanomboka tamin'ny CRF250L, i Honda dia nanova ny tobin-jiro tokana-varingarina tokana-tsiranoka, nampitombo ny kapoka 8 mm (total 63.0 mm), ary mitazona ny savaivon'ny vatan'ny 76.0 mm tsy miova. Izany dia nahatonga ny fiakarana 36cc amin'ny famindran-toerana, ho an'ny totalin'ny 286cc, izay nahatonga ny fanovana anarana ho CRF300L. Ny lozisialy piston lava kokoa dia mampitombo ny herinaratra sy ny herin'ny herinaratra mandritra ny hafainganam-pandeha rehetra.
Ho fanampin'izany, ny camshaft koa dia nanova ny fiakarana sy ny fotoana hampiakarana ny vokatra ao amin'ny faritra ambany amin'ny halaviran'ny hafainganana, izay matetika ampiasaina amin'ny fiara mitaingina tanàna sy ny fiara tsy mataho-dalana.
Ny famolavolana ny sivana / fividianana rivotra dia novaina mba hitazonana ny vatan'ny throttle 38 mm lehibe ary hampidirana ny rafitra fanalefahana vaovao miaraka amin'ny lohan-doha maivana kokoa na dia mora kokoa aza ny fihenan'ny vokatra azo avy amin'ny feo mifehy ny hovitrovitra. Raha atambatra, ireo fanovana ireo dia afaka manatsara ny fifehezana throttle, indrindra amin'ny revs ambany.
Toy ny teo aloha, ny mekanika valizy an'ny motera dia mandray endrika volavolan-tànana mba hahatratrarana lohan'ny varingarina, ary ny mpandanjalanja dia afaka mahazo fampandehanana milamina.
Ny tahan'ny fitaovana amin'ny boaty enina haingam-pandeha dia nohavaozina tamin'ny 2021. Ny elanelana misy eo amin'ny vodin-dingan-dàlana haingam-pandeha dia kely kokoa, ary ny halaviran'ny haingam-pandeha haingam-pandeha dia lehibe kokoa, mba hahafahana manao ny fifantina fitaovana tsara indrindra raha mbola mahazo aina hafainganam-pandeha. Cruise. Izany dia miteraka fifandanjana tsara eo amin'ny fampiharana an-tanàn-dehibe. , Fampiharana halavirana lavitra sy ivelan'ny arabe.
Nideraina ny clutch noho ny fisintomany kely. Ny maodely dia hanana hakana maivana kokoa (20% eo ho eo) amin'ny 2021, noho ny fonja fanampiny / fanampiana vaovao, izay manome fampisehoana tsara kokoa koa mandritra ny fihenam-bidy mavitrika.
Chassis / fampiatoana na dia matanjaka kokoa aza ny motera, ny firafitry ny singa marobe dia samy hafa, izay mampihena ny lanjan'ny fiara. Ohatra, ny clamp ambany telo izao dia vita amin'ny aliminioma fa tsy vy, ary ny lanjany dia ahena 0,1 lb. Tsy vitan'ny hoe mihena ny familiana, fa satria ny fihenan'ny lanjany dia avo be eo ambonin'ny fiara, eo afovoan'ny ambany kokoa ihany koa ny hery misintona.
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ireo singa lehibe amin'ny endriny, ny lanjan'ny frame dia ahena 0,3 pounds, raha toa kosa ny fihenan'ny sisin-tany dia ahena 25%, amin'ny fanatsarana ny fivezivezena sy ny fahatsapana ao anaty: ny fantsona midina dia ahena 30 mm; ny ambany fantsona gusset Kely; ny fantsona lehibe dia 20 mm fohy kokoa; ny savaivon'ny fantsom-stent dia ahena 3,2 mm hatramin'ny 25,4 mm.
Ankoatr'izay, ny fanitsiana ny endriny sy ny volavola crankcase dia nampitombo ny fahazoana madiodio 1,2 santimetatra, amin'izay mampihena ny mety hisian'ny fitsabahana rehefa mitondra fiara amin'ny toe-javatra sarotra eny an-dàlana.
Ny bracket dia matanjaka kokoa ary mahazaka fanoherana, ary ny tongony an-tongotra ankehitriny dia 10% lehibe kokoa hanatsarana ny fitoniana amin'ny fiara rehefa mijanona.
Ny sandry rocker aoriana dia mitovy amin'ny endriny, ary ny hamafin'ny sisiny sy ny torsional an'ny sandry aoriana dia ahena 23% sy 17%. Ny sakan'ny akaikin'ny pivot dia nihena 15 mm, ary ny ampahan'ny fiangonanan'ny fiangonana dia novaina mba hanomezana fizarana distorsiana bebe kokoa, ka ahazoana fahatsapana tsara kokoa sy fikirakirana azo vinavinaina kokoa. Ny lanjan'ny sandry rocker koa dia nihena 0,08 pounds-nanena ny lanjan'ilay lohataona, noho izany nanatsara ny hetsika fampiatoana.
Fampiatoana Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny fampiatoana dia misy forkota 43mm Showa mivadika ary rafitra haingam-pandeha tokana Pro-Link. Na izany aza, nitarina ny lalan-dra fampiatoana, ary ny dian'ny kodiarana aloha sy aoriana dia 10,2 santimetatra, fiakarana 0,4 santimetatra ary .6 santimetatra. Ny fanovana dia novaina ihany koa ary rohy sy rohy vaovao no nampiasaina. Ny valiny natambatra dia fanatsarana ny fahombiazan'ny fampiatoana, indrindra mandritra ny dia tsy mandeha amin'ny lalana.
Ny freins hydraulic dia ampiasaina alohan'ny sy aorian'ny frein. Ny rotors dia manana rotors 256 sy 220 mm, ary koa misy ABS, izay afaka mifehy tsara ny freins amin'ny toe-javatra samihafa. Mitovy amin'ny famolavolana ampiasaina amin'ny andian-tsarimihetsika CRF Performance, ny varingarin'ny master frein any aoriana dia misy fitoeran-tsolika. Mamonjy ny filàna mampifandray ny fitoeran-drano lavitra amin'ny fantsom-pahefana noforonina teo aloha io, ka miteraka endrika madio kokoa. Raha ny tokony ho izy, ABS dia azo vonoina any aoriana mba hanomezana fahatsapana mitaingina hafa amin'ny toe-javatra ivelan'ny arabe.
Ny kodiarana dia mitovy amin'ny milina ivelan'ny lalana avo lenta. Ny haben'ny kodiarana dia 21 santimetatra ho an'ny kodiarana aloha ary 18 santimetatra ho an'ny kodiarana aoriana. Afaka mihodina milamina amin'ny tany mikitoantoana izy ireo. Raha ampitahaina amin'ny maodelin'ny taona 2020, ny volon'ny aluminium mainty dia voakilasy, manana endrika manjelatra ary mora diovina.
Ny sprocket aoriana dia mahia kokoa amin'ny faritra sasany ary manana bolt kely kokoa (M8 fa tsy M10), izay mitahiry 0,04 pounds. Ny famaky aoriana dia poakaty ary voaharatra efa ho 0,03 pounds.
Accessories Honda dia manome kojakoja marobe, ao anatin'izany ny mpiambina tanana, lovia anti-skid, sockets power, spikes malalaka, boaty ambony, racks, sns.
Ny rallye CRF300L dia natao hanentanana ny sarin'i Ricky Brabec nandresy tamin'ny CRF450 Rally an'ny Dakar Rally. Miorina amin'ny CRF300L mahazatra izy io fa manana fahaiza-manao solika lehibe kokoa, mpiambina tanana ary fitaratra misy fefy, ka mahatonga azy io ho an'ny traikefa lavitra raha tsy misy vola lany ny fahakingan-tsaina, ny famoriam-bahoaka CRF300L dia manana fitoeran-tsolika lehibe kokoa ary milanja 9 pounds amin'ny fifamoivoizana an-tanàn-dehibe ary na amin'ny lalana aza. Kely noho ny maodely teo aloha, ny fivezivezena dia nitombo 15%, ka nampitombo ny herinaratra sy ny tsela, nahatonga ny fanaovana dia lavitra ho mora kokoa noho ny hatramin'izay.
Modely Tamin'ny 2021, ny mpamorona Honda dia nandray ny fihetsiketsehana CRF250L efa lasa adventurous kokoa, nanitatra ny fitoeran-tsolika 25% (0,7 litatra ho an'ny galona 3,4, izay be indrindra ao amin'ny kilasiny). Raha jerena ny toekarena solika tena tsara amin'ity maodely ity, ny CRF300L dia manana ambaratonga betsaka amin'ny fitsapana mihoatra ny 250 kilaometatra.
Toy ny masinina mihetsiketsika ao amin'ny ozinina Monster Energy Honda, mihazona ho volo ny aoriana, izay manamora ny fivezivezin'ilay mpitaingina sy mifantoka amin'ny kalitaon'ny eo alohan'ny fiara. Ny sary mena, fotsy, mainty ary manga mahasarika maso dia manahaka ny fisehoan'ny andiany CRF Performance.
Nihena ny lanjan'ny faritra maro, ao anatin'izany ny fender aloha (ahena 0,02 pounds), fonony sisiny (ahena 0,05 pounds), boaty fitaovana (ahena 0,03 pounds) ary fonosana takelaka (mihena 0,04 pounds).
Fitaovana mitaingina Mandritra izany fotoana izany dia novaina ny toerana mitaingina mba hanatsarana ny fidiran'ny mpitaingina sy ny fivezivezena amin'ny fiara. Mba hahatonga ny toeran'ny kiho ho voajanahary kokoa, maivana ny familiana, ampitomboina ny hery famonoana tohatra, ary ampiana lanja roa (5.8 ondratra) hampihenana ny hovitrovitra, ary ampidirina amin'ny fantsika ny tongony noho io antony io ihany. . Ny seza dia mampiasa pad mounting vaovao. Raha ampitahaina amin'ny maodely mahazatra, dia nitombo 20 mm hatramin'ny 190 mm ny sakany, na dia natao tery aza ny eo alohany mba hifandraisan'ny tongotr'ilay mpitaingina ny tany raha ilaina izany. Fitaovana mahazatra ny farango fitaterana mpandeha.
Ny spikes amin'ny tongotra dia afindra mihemotra ihany koa, amin'izay dia manamora ny fiasan'ny tongotr'ilay levera sy ny pedal frein, ary ny fonony aviavy farany ambony kosa dia nohavaozina mba hampihenana ny sakany.
Meter: ny metatra nomerika vaovao dia manana tarehintsoratra mainty eo am-pototry ny fotsy ary 6 mm lehibe kokoa ny endri-tsoratra mba hanatsarana ny fahitana. Ankoatry ny famakiana haingam-pandeha, famantaranandro ary rpm, nampiana fiasa vaovao, ao anatin'izany ny toeran'ny fitaovana, ny kilometatra solika ary ny fanjifana solika. Ny metatra dia mihena ihany koa 0,01 pounds.
Ny rafitra maotera / fandefasana dia nanomboka tamin'ny famoriam-bahoaka CRF250L. Honda dia nanova ny tobin-jiro efatra-silila tokana-cooled, nampitombo ny stroke 8 mm (total 63.0 mm), ary namela ny ahitra 76.0 mm tsy miova. Izany dia niteraka fiakarana 36cc tamin'ny famindran-toerana, nahatratra 286cc, izay nahatonga ny fanovana anarana ho amin'ny CRF300L Rally. Ny lozisialy piston lava kokoa dia mampitombo ny herinaratra sy ny herin'ny herinaratra mandritra ny hafainganam-pandeha rehetra.
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ireo singa lehibe amin'ny frame, ny hamafin'ny sisin'ny frame dia ahena 25%, izay manatsara ny fahaizan'ny olona mivezivezy sy ny fahatsapana ho an'ny mpitaingina azy, ary ny lanjan'ny vatan'ny olona dia mihena 0,3 pounds: ny fantsona midina dia tery 30mm; ny fantsona midina Ny gusset dia kely kokoa; ny fantsona lehibe dia 20 mm fohy kokoa; ny savaivon'ny fantsom-stent dia ahena 3,2 mm hatramin'ny 25,4 mm.
Ny sombin-tsolika alim-baravarankely vita amin'ny alim-baravarankely dia manatsara ny toetra miondrika azo hatsaraina, ary ny hamafin'ny sisiny sy ny torsional dia ahena 23% sy 17%. Ny sakan'ny akaikin'ny axis pivot dia nihena 15 mm, ary ny ampahan'ny ampahany amin'ny singa dia novaina mba hanomezana fizarana distorsiana bebe kokoa, ka mahatonga ny fahatsapana tsara kokoa sy ny fikirakirana azo vinavinaina kokoa. Ny lanjan'ny sandry rocker koa dia nihena 0,08 pounds-nanena ny lanjan'ilay lohataona, noho izany nanatsara ny hetsika fampiatoana.
Fampiatoana Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny fampiatoana dia misy forkota 43mm Showa mivadika ary rafitra haingam-pandeha tokana Pro-Link. Ny kapoka ataon'ny kodiarana aloha sy aoriana dia 10.2 santimetatra ary 10.4 santimetatra.
Ny sprocket aoriana dia mahia kokoa amin'ny faritra sasany ary manana bolt kely kokoa (M8 fa tsy M10), izay mitahiry lanja 0,03 pounds. Ny axle any aoriana dia banga ankehitriny, mampihena ny 0,02 pounds fanampiny.
Accessories Honda dia manome kojakoja marobe, ao anatin'izany ny sockets power, spikes lehibe kokoa, tahony mafana, boaty ambony, talantalana, sns.
Tongava ao anaty moto. Misoratra anarana voalohany eto amin'ny mailaka misy anay eto raha te hahazo ny vaovao farany momba ny môtô.